Tusiyaha «SuperTrend» Ayaa ah Xulashada Ugu Faa&#39;iidada Badan Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
«SuperTrend»: tilmaame macaashkaaga
Waxaan sii wadeynaa inaan ku ganacsanno isbeddel - kani waa ikhtiyaarka ugu faa'iidada badan ee sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah . Tilmaamayaasha falanqaynta farsamada caadiga ah waxay sii wadaan inay macaash ka helaan dhammaan hantida, laakiin wax ka beddelladoodu sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan sida ku jirta istiraatiijiyadda "SuperTrend".
Hantida ganacsiga : Lacag kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Xulashada khidmadda boqolkiiba : Aan ka yarayn 70-75%.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamood oo farsamo.
SuperTrend . Waxay xisaabisaa heerarka taageerada iyo iska caabinta ee ku saleysan Average True Range ama tilmaame ATR. Markay sii weynaato waa isbeddelka isbeddelka dhow. Si aad ula qabsato isbeddelka hadda jira, isticmaal cabbirka «Multiplier»; inta badan lacagta lammaanaha ah waxaa lagugula talinayaa inaad ka tagto salka qiimaha.
OsMA (Celceliska Dhaqdhaqaaqa Oscillator) . Kala duwanaansho oscillator MACD ah. Khadka ugu weyn ee “classic” MACD wuxuu u shaqeeyaa sidii oscillator, khadka calaamadaha ayaa sifeeya natiijada ugu dambeysa, kana saaraya suuqa «buuqa». Istaraatiijiyadda waxaa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo dib u soo celinta calaamadaha ganacsiga ee SuperTrend iyo jihada guud ee isbeddelka iyada oo aan loo baahnayn in la falanqeeyo waqtiga dheer;
Tilmaame ma laga heli karaa dhammaan goobaha fursadaha binary. Xaaladdayada, kani waa dillaalka PocketOption. Haddii barxadda aysan lahayn tilmaamayaasha lagama maarmaanka ah, waxaad ku soo dejisan kartaa bilaash internetka iyo waxaad u isticmaali kartaa meel kasta oo ganacsi oo kale (tusaale ahaan, MetaTrader) oo ah calaamado lagu furayo ikhtiyaarka koontadaada .
CALL- ikhtiyaar . Qiimuhu wuxuu ka soo noqonayaa xadka hoose ee SuperTrend, OsMA ayaa sii kordheysa ama ka sarreysa heerka eber;
Dooro- Xaaladaha ka soo horjeedda: qiimaha ayaa ka soo dhacaya xadka sare ee SuperTrend, OsMA ayaa hoos uga dhacaya ama ka hooseysa xariiqda eber.
Fur ganacsi on laambadda soo socda ka dib markii calaamadaha binary. Time of dhacayo fursadaha ay tahay in la aan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii sida waqti go'an oo ka shaqeeya waxa la doortay ka daqiiqo ah, sida in our video.
Dhaqdhaqaaqa OsMA ee udhaxeeya khadka dhexe waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay xilli “gudaha gudaha ah”, xaaladdan, muhiim maahan in la furo heshiis xitaa haddii qiimaha uu bilaabo inuu ka guuro xuduudaha SuperTrend. Waxay u badan tahay, tani waa uun shucuur, ka dib markaa dhaqdhaqaaq dhinac ah ayaa bilaabmi kara.
Haddii dallaalku uu suurtogal ka dhigo in la xiro ikhtiyaarka ka hor inta uusan dhicin, waan sameynaa (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadda ka soo horjeedda
Aan soo koobno . Istaraatiijiyadda intraday « SuperTrend » waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!